Amazon Queen kusukela WMS imidlalo Classic 20 payline slot ezinye izici real epholile. endle stacked nakanjani omunye wabo. Futhi osebenzisa ibhonasi kungaba umhlaba wena an awesome 100 osebenzisa khulula. I endle yaqhuma ngesikhathi osebenzisa free round uyakusiza ukunqoba ezinye izamba ezinkulu imali. Ngakho, ujoyine Indlovukazi Amazons kule slot game esijabulisayo esivela WMS ukuze ube sethubeni lokuwina ezinye izindodla zemali. Lokhu wokugembula esenzelwe ngalabo abadlali nokujaha labo kwi omkhulu.
Amazon Queen uhlanganyela namanye imidlalo ohlwini Classic WMS casino slot imidlalo kokuba ngembobo endaweni yesikhulumi mobile. Lokhu kwenziwa omunye izinkampani ezingaphansi kwayo of WMS Slots, Williams Interactive. Indlovukazi ibukeka zinkulu in the game kanye neminye imininingwane graphic engeza izinga umdlalo.
Ungakwazi ukugembula kuphi phakathi 20p ukuba £ 60 ngazo zonke spin okuyinto efana eziningi slot imidlalo.
I USP Amazon Queen kumele kube lokuthi udlala both DLELA. i.e kusukela ohlangothini lwesobunxele kuya kwesokudla kanye side ilungelo sohlangothini lwesokhohlo. Futhi aqhoshe umdlalo endle embondelene isici kokwehla ezinganikwa eziyokusiza ukuba unqobe impela imali eningi. The wild ( itshwayo waterfall) liyavela esondweni 2 noma esondweni 3 noma esondweni 4 futhi uthatha indawo yabo bonke namanye amatshwayo ngaphandle itshwayo Amazon Queen ukukusiza umhlaba inhlanganisela yokuphumelela.
Uphawu Amazon Queen liwuphawu chitha kule game. Gcina iso out for it njengoba 3 noma ngisho nangaphezu kwalabo abangamashumi 3 Amazon indlovukazi njengoba kuyophumela ezinye amazing Free osebenzisa. Bangaki osebenzisa free uthola intando kuxhomeke ngokuthi ziningi kangakanani izikhathi uphawu Amazon Queen livela. 3 izimpawu iwina wena eziyishumi osebenzisa free ngenkathi 4 iwina wena 25 futhi 5 uhlakaza imiphumela omkhulu 100 osebenzisa khulula ibhonasi. The 10 futhi 25 Free spin amabhonasi kulula kakhulu ukuthola kanti 100 kungase kudingeke kancane isineke ngasohlangothini lwakho.
The free osebenzisa ngokwabo kungenziwa retriggered futhi cishe angenamkhawulo. Lokhu bungesinye isici cool yalesi game.
Lona omunye uhambo oluya ehlathini ongeke uthande ukuba miss!!
Amazon Queen kuyinto super hit game kusuka WMS. The onqobayo zinkulu futhi lo mdlalo ethokozisayo ukudlala. Thola 3 gorilla on reels ezincikene bese ungase uzithole ekubeni njengoba esicebile njengoba indlovukazi. Ukubekezela kuyisihluthulelo lo mdlalo, kubangele boy lo mdlalo uvuza ukubekezela ngendlela simangaliso. Ngakho, ungaphuthelwa lokhu adventure ehlathini.